Diidmada Caafimaad | Abaalmarinta Abaalmarinta - Jacaylka, Galmada iyo Internetka
Bogga ugu weyn Resources Afeef Medical
Bayaankani waa daawada loo yaqaan 'The Reward Foundation'. Boggan waxaa ku jira macluumaad guud oo ku saabsan xaaladaha caafimaad iyo daaweynta. Macluumaadku maaha talo, mana aha in loola dhaqmo sida.
Macluumaadka caafimaadka ee ku yaala boggaan waxaa la siiyaa "sida" waa iyada oo aan jirin wax matalaad ah ama damaanad, muujin ama qeexid. Hay'adda Abaal-marinta Dib-u-habeeynta (Trust Fund) ma bixiso wax matalaad ah ama shuruudo ku xiran macluumaadka caafimaadka boggaan.
• Macluumaadka caafimaadka ee ku yaala boggan si joogto ah ayaa loo heli karaa, ama laga heli karaa; ama
• Macluumaadka caafimaadka ee ku yaal boggaani waa dhammaystir, run, sax ah, si joogto ah, ama aan marin habaabin.
Waa inaadan ku tiirsaneynin macluumaadka ku yaal boggan sida beddelka talobixinta caafimaadka ee dhakhtarkaaga ama bixiyaha daryeelka caafimaad ee kale.
Haddii aad qabto wax su'aalo gaar ah oo ku saabsan arrin kasta oo caafimaad ah waa inaad la tashataa dhakhtarkaaga ama bixiyaha daryeelka caafimaad ee kale.
Haddii aad u maleyneyso inaad ku jirtid xaalad caafimaad oo kasta waa inaad raadsataa daryeel caafimaad oo degdeg ah.
Waa inaadan waligaa daahin inaad raadsato talobixin caafimaad, inaad diido talobixinta caafimaadka, ama joojiso daaweynta caafimaadka sababtoo ah macluumaadka boggan.
Wax kasta oo ka mid ah daaweyntan caafimaad ayaa xadayn doonta wixii ka mid ah mas'uuliyadayada si kasta oo aan loo ogalaan sharciga sharciga ah, ama laga saaro mid ka mid ah masuuliyadayada oo aan laga saari karin sharciga sharci ahaan.
Dukumintigaan waxaa la abuuray iyadoo la adeegsanayo template-ka Contractology ee laga heli karo http://www.freenetlaw.com.